आर्ची कोक्रेनले आफ्नो विश्लेषणमा मदिरा विशेषगरि वाइनको सेवन बढाउँदा मुटुरोगको जोखिम कम हुने स्पष्ट सम्बन्ध भएको बताए । कोक्रेन र उनका साथीहरुले फरक फरक देशका मानिसहरुमा मुटुरोगले हुने मृत्युको दर किन फरक छ भनेर बुझ्ने कोसिस गरेका थिए ।
सन् २००६ मा शोधकर्ताहरुको एक टिमले यी अध्ययनहरुको गम्भिरताको समिक्षा गरेको थियो । उनीहरुले ती अध्ययनमा एक ठूलो कमजोरी देखे । अध्ययनमा मदिराको सेवन नगर्ने मानिसहरुको रुपमा ती मानिसहरु सहभागी थिए जसले रोग र बढ्दो उमेर जस्ता कारणहरुले मदिरा पिउन छोडिसकेका थिए । यस्तोमा यी मानिसहरुको स्वास्थ्य आम मानिसको तुलनामा राम्रो भएको कुनै सम्भावना थिएन ।
मदिराको धेरै सेवनले तपाईंको प्रतिरोधी क्षमता कमजोर गर्छ र यसको साथै निमोनिया र टिभी हुने खतरा बढ्छ । मदिराको सेवनले यौन व्यवहारमा जोखिम लिने सम्भावना बढ्छ र एचआइभी र अन्य संक्रमित रोगहरु हुने खतरा पनि बढ्छ ।
Don't Miss it विधार्थीले आफ्नाे रिजल्टलाइ कसरी लिने ? जान्रुहाेस्
Up Next असफलताबाट उठेर कसरी अगाडी बढ्ने ? जान्रुहाेस्